iElegance? म्याकबुक प्रो मा मेरो प्रवासको पहिलो हप्ता Martech Zone
आइतबार, अक्टोबर 29, 2006 Douglas Karr
अब सम्म, तपाईं पहिले नै म्याक बनाम पीसी विज्ञापनको साथ डुबकी बनाइएको छ:
सत्य यो हो कि म पक्का छैन कि तिनीहरूले केललाई यो के गरे यो म्याक प्रयोगकर्ताहरूले रमाइलो गरे। निस्सन्देह, सबै iLife, iMovies, iTunes, आदि प्रयोग गर्नका लागि महान हो। साथै, यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन कि रचनात्मक मानिसहरूले म्याकको प्रयोग गर्न मन पराउँछन्। यो केहि हुन सक्छ कि मान्छेहरू एडोब र क्वार्क जस्ता प्रोग्रामहरूले म्याकमा आफ्नो सुरूवात गरे।
एलिमेन्टले विश्वास गर्दछ कि एप्पल यी विज्ञापनहरुबाट हराइरहेको छ भन्ने कुरा प्रयोगकर्ता इन्टरफेसको सुन्दरता हो। यद्यपि विन्डोज विकसित भएको छ र वास्तवमा एप्पलको धेरै जसो लक्षणहरूको नक्कल गरिएको छ, यद्यपि उनीहरूले अझ पनी साँच्चिकै प्रयोगको सहजता लिन सकेका छैनन्।
म यहाँ मेरो उमेर देखाउन जाँदैछु, तर मैले यस उद्योगमा प्रोग्रामेबल लजिक कन्ट्रोलर (पीएलसी) मा भर्याder लार्जिक प्रोग्रामिंग गरेर शुरू गरें, डसमा सारियो, पीएलसीहरू डसमा सारियो, र माइक्रोसफ्ट विन्डोज, आईबीएम ओएस २ मा विकसित, एकीकृत र कार्यान्वयन अनुप्रयोगहरू। तान्ने / तान्ने सर्वर, आदि। यो कहिले पनि सजिलो भएको छैन, तर मँ आफैं पढ्ने र प्रयोग गर्ने क्रममा आफैलाई चुनौती दिईरहेको छु अधिक र अधिक स्वचालित र एकीकृत गर्न। मैले धेरै अनुभव पाएको छु र तपाई यसो भन्न सक्नुहुनेछ कि म 'माइक्रोसफ्ट केटा हुँ', जुन मेरो सम्पूर्ण क्यारियरमा मेरो प्राथमिक उपकरणको रूपमा प्रयोग गरीरहेको छ।
ओएसएक्स (म्याकको अपरेटि System प्रणाली), कम अव्यवस्थित, प्रयोग गर्न सजिलो, हेरफेर गर्न सजिलो, अनुकूलन, एकीकृत, आदि। सत्य बताउनको लागि, मसँग भएको एक रमाईलो क्षणहरू म कसरी स्थापना गर्ने भनेर स figure्केत गर्न सक्दिन। कार्यक्रम। मैले महसुस गरेन कि मैले यसलाई केवल मेरो अनुप्रयोग फोल्डरमा तान्न सक्छु। तपाइँ चाहनुहुन्न कि यो विन्डोजमा यत्तिको सजिलो थियो? शीश।
काममा अन्तरक्रियाशीलताका लागि (हामी माइक्रोसफ्ट शप होौं), मलाई कुनै समस्या छैन। नेटवर्कमा समस्या भइरहेको छैन, वायरलेस पहुँच गर्दैछ, अफिसको उपयोग गरेर र फाईलहरू पठाउन र साझेदारी गर्दै। यो एकदम पीडा रहित छ। मसँग समानान्तरहरू चलिरहेको छ 'मात्र केसमा' मैले XP चलाउनु पर्छ ... तर म यसलाई विन्डोबाट म्याकमा चलाउँछु (यो उत्तम छ)। त्यहाँ मेरो माइक्रोसफ्ट एक्सेस र माईक्रोसफ्ट भिसियो छ।
त्यसो भए ... मेरो पहिलो शब्द iElegance हुनु पर्छ। एप्पल एक सुन्दर, साधारण ईन्टरफेसमा एक उत्कृष्ट काम गर्दछ जुन एकदम उत्तम हुन्छ। जब म विगतमा पीसीबाट पीसीमा स्विच गर्छु, इमान्दारीसाथ यसलाई म्याकमा स्विच गर्नु भन्दा बढी समय लिन्छ। म प्रभावित भएँ।
तपाइँको साइट गडबड बिना WordPress २.०2.05 मा स्तरवृद्धि गर्नुहोस्!
म्याकको अद्भुत संसारमा तपाईंलाई स्वागत छ
My० को दशकको शुरुमा मैले मेरो पहिलो म्याक एक्सपोजर गरें, जब मैले डेमो देखे जसले म्याकहरू मित्रैलो छन् भन्ने तथ्यलाई जोड दिए (जस्तो कि "डिस्क थप्नुहोस्" "इन्सर गर्नुहोस् डिस्क" को विपरीत)। जब मैले १ 80 1986 मा अमेरिकामा एक बर्ष बिताएँ, शूलसँग केवल म्याकहरू थिए। तिनीहरू नेटवर्क गर्न सजिलो थिए, र ग्राफिक्स गर्न के गर्ने एउटा आकर्षण (आज, कसैले यसलाई "ग्राफिक्स" भन्दछ)। केही बर्षको लागि मैले पीसीहरूसँग काम गरें, मुख्य कारणका लागि कि एक विद्यार्थीको रूपमा एक समयमा म्याक वहन गर्न सकिँदैन। त्यसो भएमा मसँग एक सुन्दर म्याक थियो (5200२००), जुन एक पूर्ववर्ती हो, यद्यपि iMac को पर्याप्त छैन। फेरी, जब विन्डोज एक्सपी बाहिर आयो, म एक सोनी ल्यापटप किन्न प्रलोभनमा थियो। टेक समर्थन मात्र चोक्यो, त्यतिखेर मैले भिडियोको साथ पैसा कमाउन सुरु गरें, र तपाईको छेउमा बसिरहेको ग्राहकसँग हरेक घण्टा तपाईको पीसी पुनः बुट गर्नु राम्रो अनुभव होईन। यसैले हामी Final Cut bandwaggon मा कूद्यौं, पहिले नै १.२1.25 संस्करणको साथ। एक पटक पछुताएको छैन। आज हामी अफिसमा २ छौं, र Mac म्याकहरू छन्; एउटा सानो म्याक मिनीबाट सबै कुरा, एक पुरानो जी tower टावर (you बर्षको पीसी कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ जुन अझै राम्रो देखिन्छ, र अझै व्यावहारिक छ?) process प्रोसेसरहरूको साथ जी to सम्म।
तल लाइन: म्याक्सहरू प्रारम्भिक चरणमा अधिक लागत लिन सक्दछ, तर तिनीहरूले उत्पादकत्व लागतमा यति धेरै बचत गर्दछन्, काम गर्न रमाईलो छन्, भाइरसहरूबाट सुरक्षित छन्। तिनीहरू केवल काम गर्छन्।